Talyaaniga oo guuldarro la’aan ah 34 kulan oo xiriir ah, labada xul ee ka sarreeya & Shanta Xul ee ugu unbeaten-ka badan oo aan idinla wadaagi doonno – Gool FM
Talyaaniga oo guuldarro la’aan ah 34 kulan oo xiriir ah, labada xul ee ka sarreeya & Shanta Xul ee ugu unbeaten-ka badan oo aan idinla wadaagi doonno
(Rome) 12 Luulyo 2021. Xulka qaranka Talyaaniga ayaa guuldarro la’aan ah 34 kulan oo xiriir ah, waxaana uu xalay ku guuleystay tartanka Euro 2020 kaddib markii uu garaacay England.
Talyaaniga ayaa hal kulan inuu u adkaado u baahan si uu u barbareeyo labada xul ee ka sarreeya xagga guuldarro la’aan ah ee Brazil iyo Spain, kuwaasoo min 35 kulan oo xiriir ah aan dhinacooda dhulka la dhigin.
Waxa uu xulka Talyaaniga indhaha ku hayaa inuu adkaado labada kulan ee soo aaddan si uu hoggaanka hoggaanka ugu qabto xulalka sameeyo guuldarro la’aanta ugu dheer ee xiriirka ah.
Kulanka ku soo aaddan waxa uu xulka Talyaaniga la leeyahay Bulgaria 02 bisha September, halka isla 5-ta bishaas September uu la ciyaari doono Switzerland, haddii uu labadaas kulan adkaado Talyaaniga ayaa noqon doona xulka aan laga adkaan kulammada ugu badan ee xiriirka ah, waxaana uu gaari doonaa 36-kulan oo dhiniciisa aan dhulka la dhigin.
Haddaba halkaan hoose ka eeg shanta Xul ee ugu unbeaten-ka badan haatan, Talyaaniga ayaana kaga jira kaalinta labaad inkastoo labo xul ay ka sarreeyaan:-